Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Ukushintshaniswa kumanje kumodi yokutakula
Imininingwane eningiliziwe ngomyalezo othi "Ukushintshaniswa Kumodi Yokuthola"
Shintsha Imodi Yokutakula:
I-Microsoft Outlook 2003 nezinguqulo ezintsha zethula isici esisha esibizwa nge- Imodi Yokushintshanisa Enqolobane, empeleni inguqulo ethuthukisiwe yamafolda angaxhunyiwe ku-inthanethi kuzinguqulo ezindala ze-Outlook. Imodi Yokushintshanisa Enqolobane inikeza imisebenzi eminingi ukwenza ukuvumelanisa nokusebenza okungaxhunyiwe ku-inthanethi kahle nangendlela elula. Enye yazo Shintsha Imodi Yokutakula.
Lapho iseva ye-Exchange, i-database, noma ibhokisi leposi elihlangana ne ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (.ostifayela isethwe kabusha, noma kunokungahambisani phakathi kwebhokisi leposi le-Exchange ne OST file, khona-ke uma usebenzisa i-Outlook 2002 noma izinhlobo ezindala, noma usebenzisa i-Outlook 2003 nezinguqulo ezintsha kepha une Imodi Yokushintshanisa Enqolobane disabled, bese ukhetha ukusebenza ku-inthanethi, i-Outlook izokwakha okusha OST ifayela lebhokisi leposi elisha. Okudala OST ifayela ngeke lisuswe, kepha awukwazi ukufinyelela kwimininingwane ekulo. Kamuva lapho ibhokisi leposi langempela litholakala futhi, uzokwazi ukufinyelela kwimininingwane yakudala OST file, kepha lezo ezintsha OST ifayela ngeke liphinde litholakale. Uma udinga ukufinyelela kwimininingwane yakho yomibili OST amafayela, udinga ukuhlela amaphrofayli we-Outlook ngesandla ukuwaqondisa kabusha ngokuhambelana OST amafayela, okungahambi kahle.
Kodwa-ke, uma usebenzisa i-Outlook 2003 nezinguqulo zakamuva, kanye ne Imodi Yokushintshanisa Enqolobane inikwe amandla, khona-ke uzobona umyalezo olandelayo wesexwayiso lapho ibhokisi lakho leposi le-Exchange lisethwe kabusha noma lingahambisani
I-Exchange okwamanje ikumodi yokutakula. Ungaxhuma kuseva yakho ye-Exchange usebenzisa inethiwekhi, usebenze ungaxhunyiwe ku-inthanethi, noma ukhansele le logon.
okukhombisa ukuthi i-Outlook ne-Exchange okwamanje iku- Shintsha Imodi Yokutakula.
Uma ungene Shintsha Imodi Yokutakula, unezinketho ezimbili:
Imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi. Uma ukhetha Sebenza ungaxhunyiwe ku-inthanethi, ungafinyelela idatha ku-old yakho OST ifayela, kepha hhayi kuseva ye-Exchange. Okudala OST ifayela lisatholakala ngemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi.
Imodi eku-inthanethi. Uma ukhetha Xhuma, ungangena kuseva ye-Exchange, kepha hhayi endala OST ifayela. Uma ufuna ukufinyelela kudatha yakudala OST ifayela, ungaphuma ku-Outlook naku-start futhi ku Imodi engaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ngakho-ke, ngokukhetha izinketho ezahlukahlukene, ungafinyelela kokudala OST ifayela noma ibhokisi leposi elisha kuseva ye-Exchange ngokukhetha.
In Shintsha Imodi Yokutakula, ungakwazi guqula okudala OST fayela kufayela le-PST ukuhambisa imininingwane yayo ebhokisini leposi le-Exchange elisha.
Uma kamuva ibhokisi leposi le-Exchange elidala elihlangana nendala OST ifayela liyatholakala futhi, bese ngokukhetha Xhuma, uzophuma Shintsha Imodi Yokutakula ngokuzenzakalelayo.
Kodwa-ke, uma ibhokisi leposi lingatholakali unomphela, noma liphikisana nelidala OST file ngenxa ye- OST fayela inkohlakalo, nokuthi uzophuma kanjani Shintsha Imodi Yokutakula futhi wenze i-Outlook isebenze ngokujwayelekile futhi? Ngezansi impendulo.
Phuma ku-Exchange Recovery Mode bese usebenza ngokujwayelekile futhi:
Uma ibhokisi leposi le-Exchange lingatholakali kuze kube phakade, noma liphikisana nelidala OST ifayela ngenxa yenkohlakalo yefayela, sicela wenze okulandelayo ukuphuma Shintsha Imodi Yokutakula futhi vumela i-Outlook isebenze ngokujwayelekile futhi:
Vala iMicrosoft Outlook kanye nolunye uhlelo lokusebenza olungafinyelela endala OST Ifayela.
Thola okudala OST Ifayela. Ungasebenzisa Ukucinga ukusebenza ku-Windows ukusesha ifayela le- OST ifayela. Noma sesha kufayela le- izindawo ezichazwe ngaphambilini yefayela.
Sindisa idatha engaxhunyiwe ku-inthanethi kwakudala OST Ifayela. The old OST ifayela liqukethe idatha engaxhunyiwe ku-inthanethi, kufaka phakathi imilayezo yeposi nazo zonke ezinye izinto, ebhokisini lakho leposi le-Exchange elidala, elibalulekile kuwe. Ukuhlenga le datha, kufanele ukusetshenziswa DataNumen Exchange Recovery ukuskena okudala OST ifayela, buyisa idatha ekulo, bese uwagcina efayeleni le-Outlook PST ukuze ukwazi ukufinyelela kuyo yonke imilayezo nezinto ku-Outlook kalula nangendlela efanele.
Yenza isipele esidala OST Ifayela. Ukuze uphephe, kungcono ulondoloze ngokulondoloza.
Vala Imodi Yokushintshana Enqolobane.I-5.1 Start Umbono.
5.2 Ku- Amathuluzi imenyu, chofoza Ama-Akhawunti E-Mail, chofoza Buka noma shintsha ama-akhawunti akhona e-imeyili, bese uchofoza Olandelayo.
5.3 Ku- I-Outlook icubungula i-imeyili yalawa ma-akhawunti ngendlela elandelayo Uhlu, chofoza akhawunti e-mail Exchange Server, bese uchofoza Guqula.
5.4 Ngaphansi I-Microsoft Exchange Server, chofoza ukuze usule ifayela le- Sebenzisa Imodi Yokushintshana Enqolobane hlola ibhokisi.
Qamba kabusha noma susa okudala OST Ifayela.
Vula Imodi Yokushintshana Enqolobane.I-7.1 Start Umbono.
7.2 Ku- Amathuluzi imenyu, chofoza Ama-Akhawunti E-Mail, chofoza Buka noma shintsha ama-akhawunti akhona e-imeyili, bese uchofoza Olandelayo.
7.3 Ku- I-Outlook icubungula i-imeyili yalawa ma-akhawunti ngendlela elandelayo Uhlu, chofoza akhawunti e-mail Exchange Server, bese uchofoza Guqula.
7.4 Ngaphansi I-Microsoft Exchange Server, chofoza ukuze unike amandla i- Sebenzisa Imodi Yokushintshana Enqolobane hlola ibhokisi.
Yakha kabusha okusha OST Ifayela. Restart Outlook futhi uqiniseke ukuthi amasethingi e-akhawunti entsha yebhokisi leposi le-Exchange ku-Outlook alungile, futhi i-Outlook ingaxhuma ngempumelelo kuseva yakho ye-Exchange. Bese uthumela / wamukela ama-imeyili akho ebhokisini leposi le-Exchange elihambisanayo, elizokwenza i-Outlook idale ifolda entsha engaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ivumelanise imininingwane yayo nebhokisi leposi le-Exchange. Uma le ndlela ingasebenzi, iphrofayili yakho yeposi yamanje ayilungile, nawe kufanele uyisuse bese wenza entsha, ngokulandelayo:
Qhafaza i-8.2 Start, bese uchofoza Iphaneli yokulawula.
Qhafaza i-8.3 Shintshela ku-Classic View uma usebenzisa iWindows XP noma izinhlobo eziphakeme.
8.4 Qhafaza kabili Mail.
8.5 Ku- Ukusetha Imeyili ibhokisi lengxoxo, chofoza Bonisa Amaphrofayli.
8.6 Khetha eyodwa yephrofayili engalungile ohlwini bese uqhafaza Susa ukususa.
8.7 Phinda 8.6 kuze kususwe wonke amaphrofayli angalungile.
Qhafaza i-8.8 Engeza ukwakha iphrofayli entsha bese wengeza ama-akhawunti we-imeyili ngokuya ngamasethingi awo kuseva ye-Exchange.
I-8.9 Start Buka futhi uphinde uvumelanise ibhokisi lakho leposi le-Exchange, uzophuma Shintsha Imodi Yokutakula.
Ngenisa idatha etholwe kusinyathelo 3. Ngemuva kokuphuma kwakho Shintsha Imodi Yokutakula, gcina okusha OST ifayela lokuvulwa kwebhokisi leposi le-Exchange, bese uvula ifayela le-PST elenziwe kusinyathelo 3 nge-Outlook. Njengoba iqukethe yonke idatha etholakele ku-old OST ifayela, ungakopisha izinto ezidingekayo ku-new OST fayela njengoba kudingeka.